ကြံစည်မှု, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် Voice ကို
သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးဆရာပါပဲပဲဖြစ်ဖြစ်, ဤရေးသားခြင်းညွန်ပြ အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကို သင်ပိုကောင်းအရေးအသားလာအောင်နှိုးဆွဖို့ရှာနေလျှင်နေရာလေးကိုအတွက်လာမယ့်နေကြသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုလေးတွေဝဲရ - ရှုပ်ထွေးအလွန်ဒေါသထွက်လာတဲ့စိတ်ဆိုး - စက္ကူပေါ်မှာသူတို့အကြံအစည်ကိုချပြီး, သူတို့ကအတူတူပင်အဟောင်းစာအုပ်အစီရင်ခံစာများ, စာစီစာကုံးနှင့်အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူပျင်းနေကြောင့်။ ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်လာဖို့သာနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုတာဝန်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးသို့မဟုတ်မရှိမရှိမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်လိုင်းနောက်ကွယ်မှရပ်နှင့်ရိုက်ချက်များလုပ်ဘူးလျှင်ပိုကောင်းတဲ့ 3-အမှတ်သေနတ်သမားဖြစ်လာမယ့်ဘယ်တော့မှပါတယ်။ အရေးအသား တူညီတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရှိရကသွားလာရင်းပေးရန်ရှိသည်။ ဤတွင်အချို့သောအရေးအသားရုံသင့်ဦးနှောက်ကိုရှူရှိုက်အချို့အခန်းကိုလှည့်ပတ်လမ်းပေါ်မှာသူတို့အားစိတ်ကူးများပေးရသင်သို့မဟုတ်သင့်ကျောင်းသားများအတွက်လာအောင်နှိုးဆွစေခြင်းငှါအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်ကြသည်။
လေးအရာနှင့်ချီ လာ. :
တစ်ဦးအလင်း (: "21 နှင့်ကျော်" တစ် flickering ချောင်းကျွမ်းတယ်မီးသီး, ရေးဆွဲရိပ်တဆင့်လရောင် filtering ကိုတစ်ဦးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နီယွန်အလင်းစာဖတ်ခြင်း) ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရင်းအမြစ်
(ကဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေအသိုက်ထဲကနေက၎င်း၏ wobbly ခေါင်းကိုဥိးဟာ bristles အတွက် matted ဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်နဲ့ပန်းရောင် hairbrush တစ် Dali ပန်းချီကားတစ်ဦးစွန့်ပစ်ပုံတူတစ်ဦးကလေးရော်ဘင်,) တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရာဝတ္ထု
(ချွဲ၏စိုစွတ်သော splat ယင်းပင်းမင်းဆိုင်အနီးဆေးလိပ်အဟောင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေဖြင့်လမ်းဘေးနှိပ်တစ် cobblestone လမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီး ricocheting တစ်ဖန်ပုလင်းများ၏ Ping, လူရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာဒင်္ဂါးပြား၏လက်တဆုပ်စာ၏ Ching) onomatopoeia သုံးပြီးတစ်သံကို
တစ်ဦးကတိကျတဲ့နေရာအရပ် (Brooks စိန့်နှင့်6ရိပ်သာအကြား dingy လမ်းကြား, ဖန် beakers ပူပြားနှင့် Formaldehyde အတွက် floating ဘားနှင့်ပြည့်စုံဗလာသိပ္ပံစာသင်ခန်း, Flannigan ရဲ့အရက်ဆိုင်၏မိုက်, smoky အတွင်းပိုင်း)
သငျသညျစာရင်းကိုဖန်တီးပြီးတာနဲ့လေးပါးပစ္စည်းများနှင့်သင့်ရွေးချယ်တစ်ခုတည်းဇာတ်ကောင်တစ်ဦးချင်းစီကို အသုံးပြု. တအပိုဒ်ပုံပြင်ရေးပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်, ထိုဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက် (ကြီးမားသောသို့မဟုတ်ပျော့) တစ်ရုန်းကန်မှတဆင့်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ထားတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်ရုန်းကန်ဖြေရှင်းရှိပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှကျပန်းစာရင်းပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အဆုံးမှာအတူတကွထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထားလျှင်၎င်းသည်ရေးသားဖို့ပိုပြီးပျော်စရာပါပဲ။ ကြိုတင်စာရင်းဖန်တီးသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစီစဉ်မနေပါနဲ့!
ကျောင်းသားများစက္ကူတစ်စလစ်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းကို item (အလင်း, အရာဝတ္ထု, အသံနှင့်နေရာ) ၏တဦးတည်းရေးပါ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့စားပွဲခုံပေါ်သီးခြားစီမှတ်သားသေတ္တာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနေရာချရမည်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းရေးသားဖို့, ကျောင်းသားများပုံးတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်တစ်ဦးကို item ဆွဲရမယ်သူတို့ကြိုတင်အချက်တွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖို့ဇာတ်လမ်းကိုစီစဉ်လို့မရဘူးသေချာပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းရေးပါ။
အရူး Lyrics ဆွေးနွေးပွဲ
ပိုကောင်းသငျသညျကိုကြားဖူးပါဘူးတယောက်သို့မဟုတ်သင်သီချင်းစာသားမသိသောအရာကိုမှတဦးတည်း, http://www.lyrics.com ကဲ့သို့သောသီချင်းစာသားက်ဘ်ဆိုက်သွားပြီးကျပန်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာ, ငါဝက်ဘ်ဆိုက်မှ သွား. မရွေး, ဖာဂီရဲ့ "တစ်ဦးက Little ကပါတီဘယ်သူမှ (ကျနော်တို့တယ်အားလုံး) သေဆုံးဘယ်တော့မှမ။ " ငါသီခငျြးကိုကွားဖူးပါဘူးနှင့်သီချင်းစာသားကိုကြားကြပြီမဟုတ်။
ထို့နောက်သီချင်းမှတဆင့် scroll နှင့်သင်သည်ထိုကြောငျးအတှကျသငျ့လျြောသောလိမ့်မယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နဲ lyric ကိုရွေးပါ။ ဖာဂီရဲ့သီချင်းထဲမှာငါ "သင်, GoonRock ဘယ်လိုထင်သလဲ" ကိုရှေးခယျြ အဲဒီမှာပေါ် nuttiest ထားသောစာပိုဒ်တိုများခဲ့လို့ပဲ။
ထို့နောက်သင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများသုံးစွဲဖို့အလွန်မဖြစ်နိုင်လူနှစ်ဦးအကြားရွေးချယ်ထားသည့်ပထမဦးဆုံး lyric အတူစကားလက်ဆုံစတင်ပါ။ ဥပမာ, ငါကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုကိုရေးလိမ့်မယ် "GoonRock, သငျသညျအဘယျသို့ထင်သလဲ?" အဒေါ် Ida နေထိုင်မှု Center က Assisted ဣနြေ္ဒ Meadows အတွက်ကွာနှစ်ခုဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်ကထိုင် Bernie မေးတယ်။
သငျသညျ့စကားပြောဆိုမှုအရပြီးတာနဲ့နှစ်ခုဇာတ်ကောင်များအကြားစကားပြောဆိုသဘာဝကျပါတယ်သေချာအောင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြောင်းလဲ, တခြားနေရာအခြားနှစ်ဦးကိုသီချင်းစာသားထည့်ပါ။ သင်ဇာတ်ကောင်များ၏တဦးတည်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကစကားဝိုင်းအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်သည်အထိ Continue ။
ဖလှယ်မှုနှင့်တန်းအတွက်ပုဒ်ဖြတ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအရှည်သို့မဟုတ်နံပါတ် assign ။
သုံးလူကြိုက်များဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့က "Braveheart" မှ (ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗီရှိုးထံမှဝီလျံဝေါလေ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင် (Romeo နဲ့ Juliet ထံမှ Bella အဆိုပါ Twilight ဇာတ်လမ်းတွဲထဲကနေ, Benvolio) (Ren နှင့် Stimpy ထံမှ Ren, TMNT ထံမှ Michelangelo), ပြဇာတ်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုထဲကနေအရေးပါသောဇာတ်ကောင်များသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်နိုင်ပါတယ် "နယူးမိန်းကလေး") ကနေ Jesse ။
တစ်ဦးလူကြိုက်များနတ်သမီးပုံပြင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ (Snow White နှင့်ခုနစ် Dwarves, Goldilocks နှင့်သုံးဝံ စသည်တို့ကို, ပိုယ် Gretel,)
သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောဇာတ်ကောင်ရဲ့အသံများတစ်ဦးချင်းစီကို အသုံးပြု. သင်ရွေးချယ်ထားသောနတ်သမီးပုံပြင်သုံးခု, One-အပိုဒ်အကျဉ်းချုပ်ရေးပါ။ ဘယ်လိုတွမ်လက်မ၏ William Wallace ရဲ့ version ကို Bella Swan ရဲ့ကှာခွားမလဲ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်သတိထားမိလိမ့်မယ်အသေးစိတ်, သူသို့မဟုတ်သူမကိုသုံးပါမယ်လို့စကားနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမဇာတ်လမ်းဆက်စပ်မယ်လို့ထားတဲ့အတွက်သေံစဉ်းစားပါ။ William Wallace ဥပမာ, သူ့သတ္တိအပေါ်သူ့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, သော်လည်း Bella, တွမ်လက်မများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမိပေလိမ့်မည်။
တစ်ဝတ္ထုမှတဆင့်သွားပြီးနောက်သို့မဟုတ်သင့်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဆော့ကစား, သင့်ကျောင်းသားများတစ်ဦးချင်းစီဖို့ယူနစ်ကနေတဦးတည်းဇာတ်ကောင် assign ။ ထို့နောက်အုပ်စုတစ်စုသုံးယောက်၌သင်တို့၏ကြောငျးသားမြားသုံး၏တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကစားအတွက်လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုထဲမှာအခန်းတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ရေးသားဖို့ ဇာတ်ကောင် 's အမြင်များ။
Kaplan MCAT သင်တန်းများ
အားလုံးမှော် Poppets အကြောင်း
လမ်၏ Tituba သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား
Passage ခရစ်ယာန် Cruise နဲ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွင်းပိုင်း alaska
ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမှအလားတူ Paranormal ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါသလား
စပိန်အတွက်ဆန့်ကျင်ထင်မြင်ချက် Express လုပ်နည်း
ကျွန်မတစ်ဦးမကောင်းပါ GRE ရမှတ်တယ်စဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်အဘယျနညျး
တစ်ဦး Term Spread သို့မဟုတ်အတိုးနှုန်း Spread ဆိုတာဘာလဲ
ပြင်သစ်တွင် "Retourner" (သို့ပြန်သွားသည်မှ) Conjugate လုပ်နည်း
လျှပ်စစ်စပယ်ယာများနှင့်လျှပ်ကာ 10 ဥပမာများ
'' မတ်ေတာသညျတကယ်တော့ '' Quotes
ဘယ်လိုသာမိုမီတာ Air ကိုအပူချိန်တိုင်းပါသလား?
စုံလင်သောပုံစံများ - ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်တိုးတက်ရေးပါတီ?